Isi ihe isii dị na Melanotan-II / MT6 Nke Need Kwesịrị Knowmara
3. Gini mere Melanotan-II ji ewu ewu?
4. Melanotan-II nwere ihe egwu ọ bụla?
5. Kedu ka m ga-esi gbanye usoro onyonyo Melanotan-II nke ezi uche dị na ya?
6. Kekọrịta ụzọ ntụkwasị obi Melanotan-II dị n'ịntanetị
N'ịkọ akụkọ ndị dị otú a, òtù ndị nyocha ahụ rụkwara ọganihu ọzọ dịka ịchọpụta Melanotan-II uru A na - echegbu onwe ya site na ịchọpụta Bremelanotide (PT-141), ihe na - akpata adịghị ike ọgwụgwọ nke ọgwụ ahụ. Ma Melanotan II peptide na Bremelanotide bụ ndị amachitere ma nye ikikere maka ọrịre na ụlọ ọrụ biotechnology maka mmepe nwere ike banye ọgwụ ọgwụ bara uru.
Melanotan II na-arụ ọrụ site na ịgbalite ụfọdụ ndị na-anabata melanocortin, na-eduga n'ịba mma tanning, mụbaa agụụ mmekọahụ, ịba ụba metabolism na agụụ na-egbochi. N'ime nyocha emere iji nyochaa mmetụta nke Melanotan 2 na nri nri, achọpụtara na peptide hormone na-arụ ọrụ etiti melanocortin (MC) mgbe a na-enyeju nri ma na-enye ụmụ oke nri.
Ugbu a, ka anyị lelee nyocha Melanotan-II nke ndị jiri MT2 (121062-08-6) nyere.
Chris: Dị ka o kwesịrị ịdị, m bụ onye na-acha odo odo na-acha odo odo nwere obere anụ ọkụ na ntụpọ na-adịghị mma. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ahụ erughị m ala maka ọdịdị m na enweghị m ike ịnwe mbibi anyanwụ, enwere m obi abụọ maka iji ngwaahịa tanning. Otu ụbọchị, ekpebiri m iche okwu ahụ ihu! E kwuwerị, ndụ dị mkpụmkpụ iji bie ndụ nke erughị eru. M kpebiri na ọ bụ oge maka Melanotan zụrụ ma gaa maka otu ụbọchị ahụ mgbe ọrụ gasịrị. Nke a bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma m meworo n'oge ndụ m. Maa amụma..! Enwetara m ihe na-acha aja aja na-acha aja aja ma ọ bụrụ na elekere isii na-eleta m. Enweghị m ike ikwere ya. Anọ m na-eji ya eme ihe n'okpukpe kemgbe ahụ ọ dịghịkwa akwa ụta ọ bụla.
Mgbe m malitere iji ya, ọ tụrụ m n'anya ịchọpụta na injees Melanotan-II adịghị egbu mgbu dịka m chere na agịga ahụ dị obere. Ana m etinye onwe m 1 mg ọgwụ ọgwụ hormonal na tummy ụbọchị abụọ ọ bụla na ọ na-esiri m ike ịnụ ụfụ agịga ahụ. Iji belata akụkọ dị mkpirikpi, ahụrụ m ihe niile gbasara ngwaahịa a n'anya n'ihi na o meela ka akpụkpọ m nwee nrọ. Ka o siri dị, enwere m obi ụtọ ịmara na ahapụla m obere ọpụpụ na ọrịa kansa.
Salome Clinton: N'ịbụ onye sitere na agbụrụ Irish, akpụkpọ ahụ m dị ọcha nke ukwuu. Tupu ịchọta na iji Melanotan peptide, m na-enwe oké sunburns ọ bụla n'oge okpomọkụ. Mana ihe gbanwere nke ọma maka oge m malitere itinye Melanotan-II. Tan nke Melanotan-II tupu na mgbe oge ọkọchị bụ otu. Anaghị m atụ egwu oge ezumike ọzọ n'ihi na ngwaahịa a na-enye akpụkpọ m nchedo ọ chọrọ iji nọgide na-enweghị ntụpọ n'ime afọ. Ọ bụ ngwaahịa nke m nwere ike ịgwa ndị ọzọ ga-achọ ịtinye ọmarịcha tan na akpụkpọ ha.
Sandra: Ee! Enwere m ike ịnụ ụtọ oge ezumike m n'ụsọ osimiri na-enweghị atụ egwu maka anwụ na-acha, n'ihi Melanotan-II Results. Nke a bụ ihe m na-enwetụbeghị afọ ole na ole gara aga n'ihi na anwụ enweghị obi ọjọọ nye anụ ahụ m hụrụ n'anya.
Na-aza Verdens, akwụkwọ akụkọ Norwegian, banyere ma ọ na-eji ọgwụ mgbochi Melanotan-II, Linn Connie Danielsen ekwughị okwu ya banyere akpụkpọ ojii Melanotan. O kwuru na ọgwụ ọgwụ ahụ na-enye ya oke miri emi na-adịte aka n'ime afọ na ọ na-enwe obi ụtọ maka ọdịdị ya. Ọ gbakwụnyere na ọgwụ ọgwụ hormonal ahụ na-ebelata mmetụta na-akpata nchekasị nke nkwụsị anyanwụ sara mbara n'oge oge oyi.
Ọ bụ ọgwụ nwoke nwere oke nwere ike ịtụkwasị obi maka inwe agụụ mmekọahụ ọ ga-enwe. Nke ahụ kọwara nke ọma ihe kpatara Melanotan ọgwụgwọ dysfunction uru bara ezigbo uru n'etiti subcultures dị ka ọnọdụ "nwoke nwere mmasị nwoke".
Ka o sina dị, ebumnuche bụ isi nke Melanotan 2 bụ ịmịcha akpụkpọ ahụ, yabụ, ọ bụghị onye ọ bụla na-eji ya ga-enwe mgbanwe na agụụ mmekọahụ ha. N'ọnọdụ ebe ọgwụ ahụ nwere mmetụta na agụụ mmekọahụ, onye ahụ nwere ike ọ ga-enwe mmetụta 1 ruo 3 awa mgbe usoro ọgwụgwọ gachara. Mmetụta ya na-adịkarị ruo awa abụọ ruo anọ.
Nhọrọ ọzọ ị na-emeso nsonaazụ Melanotan-II na-achọghị na-ekewa ọgwụ gị ugbu a na obere usoro. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ewere ọgwụ 1mg, ị nwere ike kewaa ya na ọgwụ abụọ 0.5mg ma were ha oge ụfọdụ n'etiti. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na mmetụta ndị ọzọ na-abawanye na usoro onunu ogwu; ihe dị elu dị na ya, otú ahụ ka mmetụta ndị ahụ ka njọ.
Nwere ike igba peptide Melanotan n'okpuru akpụkpọ ahụ (subcutaneous) ma ọ bụ n'ime akwara (intramuscular); ebe obula ichoro iru gi aru. Hapu akpukpo aru aru site na uru ahu ma bulie ya iji mee ka agiri ahu banye n'ime akwara nke akwara. MT2 na-etinyezi obi n'ọbara ma gbasaa kwa ahụ gị.
Phcooker.com bụ otu n'ime ndị a pụrụ ịtụkwasị obi Melanotan-II ndị na-eweta ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta Melanotan-II (121062-08-6) enweghị isi, isi Melanotan-II ka ị kpuchie. E wezụga nke a, nke a bụ Melanotan-II kachasị mma maka ego Melanotan-II kasị asọmpi.
Wessells, H., Levine, N., Hadley, ME, Dorr, R., & Hruby, V. (2000). Melanocortin agonists na-anabata ihe, penile erection, na mkpali mmekọahụ: ọmụmụ mmadụ na Melanotan II. Akwụkwọ akụkọ ụwa nke nchọpụta adịghị mma, 12(S4), S74.
Evans-Brown, M., Dawson, RT, Chandler, M., & McVeigh, J. (2009). Ojiji nke melanotan M na II na ọnụ ọgụgụ mmadụ dum.
Nelson, ME, Bryant, SM, & Aks, SE (2012). Ọgwụ Melanotan II na-ebute nsí usoro na rhabdomyolysis. Clinical Toxicology, 50(10), 1169-1173.
Heijboer, AC, Van Den Hoek, AM, Pijl, H., Voshol, PJ, Havekes, LM, Romijn, JA, & Corssmit, EP (2005). Intracerebroventricular ochichi nke melanotan II enwekwu insulin uche nke glucose mkpofu na ụmụ oke. Diabetologia, 48(8), 1621-1626.
Breindahl, T., Evans ‐ Brown, M., Hindersson, P., McVeigh, J., Bellis, M., Stensballe, A., & Kimergård, A. (2015). Njirimara na njirimara site na LC-UV ‐ MS / MS nke melanotan II skin ‐ tanning ngwaahịa ere na iwu akwadoghị na Internetntanetị. Ọgwụ nyocha na nyocha, 7(2), 164-172.
Li, G., Zhang, Y., Wilsey, JT, na Scarpace, PJ (2004). Enweghi azịza na nkwonkwo thermogenic dị na melanotan II na oke oke oke na-eri nri n'agbanyeghị belata okwu melanocortin 3 na 4. Akwụkwọ nke Endocrinology, 182(1), 123-132.